6 Arimood u diyaar garoow haddii aad xiriir la yeelato qof ajanabi ah - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada 6 Arimood u diyaar garoow haddii aad xiriir la yeelato qof ajanabi...
Waxaa hubaal ah in qoyskaaga, qarabaadaada iyo asxaabtaada ay fikrado ka dhiiban doonaan xiriirka aad la yeelato qof ajaanabi ah. Bulshadu Soomaalidu wali ma aqbalin xiriirka nuucaan ah. Qaasatan marka ay waliba gabadh Soomaali ah nin ajaanabi ah xiriir la yeelato waxay u badantahay in qoyskeeda ay ka hor imaan doonaan. Waxaa muhiim ah in aad adigu tahay mid ku kalsoon naftaada, go’aankaaga iyo qofka aad jeclaatay.
Waxaad xoogaa saartaa dhowrka qof ee qoyskaaga ugu muhiimsan in aad ka dhaadhiciyo arintaan. Qaasatan aabahaa, hooyadaa iyo walaalahaa. Haddii ay dhacdo in xaaladu meel xun gaadho oo kala tag ay timaado, go’aanka ugu dambeeya adaa iska leh oo in aad kala doorato jaceylkaaga iyo qoyskaaga waa mid adag.